ဘုရားရှင်အား တစ်ကြိမ် ဦးချရခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများ – WunYan
ဘုရားရှင်အား တစ်ကြိမ် ဦးချရခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ခါတော့ ဘုရားရှင်ဟာ နံနက်မိုးသောက်ထတဲ့အချိန်မှာမဟာကရုဏာသမာပတ်ဝင်စားရင်း စဏ္ဍာလတင်းကုပ်မှာနေတဲ့ သက်တမ်းကုန်နေတဲ့အဘွားအိုတစ်ယောက်ကို သွားမြင်တော်မူပါတယ်သူ့နာမည်က စဏ္ဍာလီတဲ့။
စဏ္ဍာလီ အမည်ရှိတဲ့ အဘွားအိုဟာ အခုမနက်ခင်းမှာပဲ သေတော့မယ် ပြီးတော့ ဘာကုသိုလ်မှလည်း မရှိတဲ့အတွက်ငရဲလည်း ကျမယ်တဲ့။ ငရဲမကျစေချင်တဲ့အတွက် ဘုရားရှင်ဟာသံဃာပေါင်းများစွာခြံရံပြီးရာဇဂြိုဟ်မြို့ထဲကို ဆွမ်းခံကြွတော်မူပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ အဘွားအိုကလည်း မြို့ပြင်အထွက်လမ်းမှာ ဘုရားရှင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တည့်တည့်တိုးနေတော့တာပေါ့။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်း အဘွားအို ရှေ့ဆက်သွားမရပဲ ရှိခိုးကန်တော့ဖြစ်သွားအောင် ရှေ့တည့်တည့်ကနေ ပိတ်ရပ်ထားတော်မူပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဘွားအိုက ဘုရားရှင်ကို ရှိမခိုးဘူးတဲ့။ဒီအတိုင်းပဲ ပေပြီး ရပ်နေတယ်။ ဒီအခါမှာ အရှင်မောဂ္ဂလာန်က ဂါထာနှစ်ဂါထာနဲ့ ဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးဖို့ အဘွားအိုကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
စဏ္ဍာလီဒါယိကာမကြီး အခြံအရံ အကျော်စောရှိတော်မူသောဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ ခြေတော်ကို ရှိခိုးလော့။ အမြတ်ဆုံးဣသိ ဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် သင့်ကိုသာလျှင် ချီးမြှောက်တော်မူခြင်းငှာ ရပ်တည်တော်မူ၏။ တာဒိဂုဏ်(လောကဓံနှင့် ကြုံသော်လည်းတုန်လူပ်ခြင်းမရှိ သည်းခံနိုင်ခြင်း)နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား၌ စိတ်ကို ကြည်လင်စေလော့ လျှင်မြန်စွာ လက်အုပ်ချီ၍ ရှိခိုးလိုက်လော့။ သင်၏ အသက်သည် အလွန်တိုတောင်းလှ၏” တဲ့။
အရှင်မောဂ္ဂလာန်က ဘုရားရှင်ရဲ့ ကြည်ညိုဖွယ်ရာဂုဏ်တွေကိုလည်း ဟောပြပါတယ်။ သူတစ်ခဏအတွင်း သေရတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်း တန်ခိုးနဲ့ မြင်အောင် ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ အဘွားအိုဟာ ဘုရားရှင်ကို ကြည်ညိုမြတ်နိုးစွာနဲ့ ဦးချရှိခိုးပါတယ်။
ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ရှိခိုးပြီးတော့ အဘွားအိုဟာ သူ့အတွက် တစ်ပင်တစ်ပန်းကြွလာတဲ့ ဘုရားရှင်ကို ကြည်ညိုမြတ်နိုးစွာနဲ့ လက်အုပ်ချီပြီးကြည်ညိုနေပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် နတ်ပြည်ရောက်ဖို့လုံလောက်ပြီဆိုတာကို သိသွားတဲ့ ဘုရားရှင်ဟာသံဃာများနဲ့ အတူ ရာဇဂြိုဟ်မြို့ထဲသို့ ဆွမ်းခံကြွသွားတော်မူပါတယ်။
ဘုရားရှင်ကြွပြီး ခဏအတွင်းမှာပဲသားဇောကြောင့် ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ နွားမတစ်ကောင်အတင်းဝင်ဝှေ့လို့ အဘွားအိုဟာ သေပွဲဝင်ရရှာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေခါနီး ဘုရားရှင်ကို ရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့် လူရဲ့ အသက်နဲ့ဆိုရင် နှစ်ပေါင်း သုံးကုဋေနဲ့ အနှစ်ခြောက်သန်းအသက်ရှည်တဲ့တာဝတိံသာနတ်ဘုံကို ရောက်သွားပါတယ်။
နတ်ဘုံရောက်ရောက်ခြင်းငါ ဘာကုသိုလ်ကြောင့် ရောက်ရတာလဲ”လို့ ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့ ဘုရားရှင်ကို ရှိခိုးတဲ့ ကုသိုလ်ကြောင့်ဆိုတာ သူ သိသွားတယ်တဲ့။ သူ ဒီလိုရှိခိုးဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းဟောကြားပေးတဲ့အရှင်မောဂ္ဂလာန်ရှိရာကို သူ့ဗိမာန်ကြီးပါ သယ်ဆောင်ရောက်လာပြီး ကျေးဇူးတင်စကား လျှောက်ထားပါတယ်။
ဒီသာဓကကိုထောက်ပြီး သေခါနီးဘုရားရှင်ကို တစ်ခဏတာ ကြည်ညိုရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်လေးတောင် ဒီလောက်ကောင်းကျိုးတွေ ပေးသေးရင် သူတော်ကောင်းတို့လို နေ့စဉ်ကြည်ညိုရှိခိုးနေကြတဲ့သူတွေဆို ဘယ်လောက်ထိများ ကောင်းကျိုးတွေရလိုက်မလဲ ?
တွေးပြီးတော့ ရတနာသုံးပါးကို ကြည်ညိုကိုးကွယ်ပူဇော်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း
အရှင်ဇဝန – မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)
ဘုရားရှငျအား တဈကွိမျ ဦးခရြခွငျး အကြိုးကြေးဇူးမြား
တဈခါတော့ ဘုရားရှငျဟာ နံနကျမိုးသောကျထတဲ့အခြိနျမှာမဟာကရုဏာသမာပတျဝငျစားရငျး စဏ်ဍာလတငျးကုပျမှာနတေဲ့ သကျတမျးကုနျနတေဲ့အဘှားအိုတဈယောကျကို သှားမွငျတျောမူပါတယျသူ့နာမညျက စဏ်ဍာလီတဲ့။
စဏ်ဍာလီ အမညျရှိတဲ့ အဘှားအိုဟာ အခုမနကျခငျးမှာပဲ သတေော့မယျ ပွီးတော့ ဘာကုသိုလျမှလညျး မရှိတဲ့အတှကျငရဲလညျး ကမြယျတဲ့။ ငရဲမကစြခေငျြတဲ့အတှကျ ဘုရားရှငျဟာသံဃာပေါငျးမြားစှာခွံရံပွီးရာဇဂွိုဟျမွို့ထဲကို ဆှမျးခံကွှတျောမူပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အဘှားအိုက ဘုရားရှငျကို ရှိမခိုးဘူးတဲ့။ဒီအတိုငျးပဲ ပပွေီး ရပျနတေယျ။ ဒီအခါမှာ အရှငျမောဂ်ဂလာနျက ဂါထာနှဈဂါထာနဲ့ ဘုရားရှငျကိုရှိခိုးဖို့ အဘှားအိုကို တိုကျတှနျးပါတယျ။
စဏ်ဍာလီဒါယိကာမကွီး အခွံအရံ အကြျောစောရှိတျောမူသောဂေါတမမွတျစှာဘုရား၏ ခွတေျောကို ရှိခိုးလော့။ အမွတျဆုံးဣသိ ဖွဈတျောမူသော မွတျစှာဘုရားသညျ သငျ့ကိုသာလြှငျ ခြီးမွှောကျတျောမူခွငျးငှာ ရပျတညျတျောမူ၏။ တာဒိဂုဏျ(လောကဓံနှငျ့ ကွုံသျောလညျးတုနျလူပျခွငျးမရှိ သညျးခံနိုငျခွငျး)နှငျ့ ပွညျ့စုံတျောမူသော ပူဇျောအထူးကို ခံယူတျောမူထိုကျသော မွတျစှာဘုရား၌ စိတျကို ကွညျလငျစလေော့ လြှငျမွနျစှာ လကျအုပျခြီ၍ ရှိခိုးလိုကျလော့။ သငျ၏ အသကျသညျ အလှနျတိုတောငျးလှ၏” တဲ့။
အရှငျမောဂ်ဂလာနျက ဘုရားရှငျရဲ့ ကွညျညိုဖှယျရာဂုဏျတှကေိုလညျး ဟောပွပါတယျ။ သူတဈခဏအတှငျး သရေတော့မယျဆိုတာကိုလညျး တနျခိုးနဲ့ မွငျအောငျ ပွလိုကျပါတယျ။ အဲဒီတော့မှ အဘှားအိုဟာ ဘုရားရှငျကို ကွညျညိုမွတျနိုးစှာနဲ့ ဦးခရြှိခိုးပါတယျ။
ထိခွငျးငါးပါးနဲ့ ရှိခိုးပွီးတော့ အဘှားအိုဟာ သူ့အတှကျ တဈပငျတဈပနျးကွှလာတဲ့ ဘုရားရှငျကို ကွညျညိုမွတျနိုးစှာနဲ့ လကျအုပျခြီပွီးကွညျညိုနပေါတယျ။ ဒီလောကျဆိုရငျ နတျပွညျရောကျဖို့လုံလောကျပွီဆိုတာကို သိသှားတဲ့ ဘုရားရှငျဟာသံဃာမြားနဲ့ အတူ ရာဇဂွိုဟျမွို့ထဲသို့ ဆှမျးခံကွှသှားတျောမူပါတယျ။
ဘုရားရှငျကွှပွီး ခဏအတှငျးမှာပဲသားဇောကွောငျ့ ဒေါသဖွဈနတေဲ့ နှားမတဈကောငျအတငျးဝငျဝှလေို့ အဘှားအိုဟာ သပှေဲဝငျရရှာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သခေါနီး ဘုရားရှငျကို ရှိခိုးတဲ့ကုသိုလျကွောငျ့ လူရဲ့ အသကျနဲ့ဆိုရငျ နှဈပေါငျး သုံးကုဋနေဲ့ အနှဈခွောကျသနျးအသကျရှညျတဲ့တာဝတိံသာနတျဘုံကို ရောကျသှားပါတယျ။
နတျဘုံရောကျရောကျခွငျးငါ ဘာကုသိုလျကွောငျ့ ရောကျရတာလဲ”လို့ ပွနျဆငျခွငျကွညျ့လိုကျတော့ ဘုရားရှငျကို ရှိခိုးတဲ့ ကုသိုလျကွောငျ့ဆိုတာ သူ သိသှားတယျတဲ့။ သူ ဒီလိုရှိခိုးဖွဈအောငျ တိုကျတှနျးဟောကွားပေးတဲ့အရှငျမောဂ်ဂလာနျရှိရာကို သူ့ဗိမာနျကွီးပါ သယျဆောငျရောကျလာပွီး ကြေးဇူးတငျစကား လြှောကျထားပါတယျ။
ဒီသာဓကကိုထောကျပွီး သခေါနီးဘုရားရှငျကို တဈခဏတာ ကွညျညိုရှိခိုးတဲ့ကုသိုလျလေးတောငျ ဒီလောကျကောငျးကြိုးတှေ ပေးသေးရငျ သူတျောကောငျးတို့လို နစေ့ဉျကွညျညိုရှိခိုးနကွေတဲ့သူတှဆေို ဘယျလောကျထိမြား ကောငျးကြိုးတှရေလိုကျမလဲ ?
တှေးပွီးတော့ ရတနာသုံးပါးကို ကွညျညိုကိုးကှယျပူဇျောကွပါလို့ တိုကျတှနျးရငျး
အရှငျဇဝန – မတ်ေတာရှငျ(ရှပွေညျသာ)